Bangladesh tour of zimbabwe 2011 News - Bangladesh tour of zimbabwe 2011 Latest news on thatscricket.com
Bangladesh remove Shakib, Iqbal from captaincies
Dhaka (Bangladesh), Sep 6: The Bangladesh Cricket Board has relieved skipper Shakib Al Hasan and vice captain Tamim Iqbal of their leadership roles for their poor performance in last month's tour of Zimbabwe. The board's media committee chairman Jalal Yunus told ...
Bangladesh win maiden ODI on tour of Zim
Harare, Aug 20: In the fourth ODI against Zimbabwe of their current tour, Bangladesh succeeded in pulling one back, winning by six wickets with 80 balls to spare and making the series score 1-3. Despite a century from Zimbabwe captain and ...
Harare, Aug 17: Zimbabwe snatched an astonishing victory over Bangladesh at Harare Sports Club here Tuesday to win their five-match ODI series three up and two to play. They got home with just four balls to spare, grabbing the final Bangladesh ...
Vitori steamrolls B'desh to take Zim 2-0 up
Harare, Aug 15: Zimbabwe stole a march on Bangladesh, winning the second ODI of the former's tour by 7 wickets with 35 balls to spare. After a forceful performance by Zimbabwe fast bowler Brian Vitori, who took 5/20 to help ...
Embattled India can learn from Zimbabwe
Harare/Edgbaston, Aug 15: After their absolute walloping at the hands of a rampaging England side in the current Test series, India has a task to get back to the drawing board. Part of a meticulous autopsy on their demise as the ...
Zimbabwe trounce B'desh by 6 wickets in 1st ODI
Harare, Aug 13: Carrying on from their recent Test win against the Bangladeshi touring side, Zimbabwe effected a strong start to the 5-match ODI series, romping home by 6 wicket with 52 balls to spare. New-comer Zimbabwean paceman Brian Vitori picked ...
Zimbabwe tangle with B'desh in tour's 1st ODI
Harare, Aug 12: Two of the littlest Test teams have seen a lot of each other in the one-day arena in recent times. In the last two years, Bangladesh has clashed with Zimbabwe in three 5-match series. And although the former ...
Zimbabwe beat listless Bangladesh by 130 runs Harare, Aug 9: Zimbabwe scripted a memorable victory over Bangladesh in their comeback to Test match arena. They beat the more fancied Bangladesh side by 130 runs.On the final day of the match, with seven wickets in hand, Bangladesh needed 265 ...
Zimbabwe sense victory against B'desh on Day 4
Harare, Aug 7: Zimbabwe are closing in on victory in the one-off Test against the visiting Bangladeshi side by mounting a huge target of 375, thanks largely to a second-innings unbeaten century from captain Brendan Taylor. Then the hosts reduced the ...
Bangladesh counter Zimbabwe on Day 3
Harare, Aug 7: In a one-off Test which is shaping up to be a keen contest, hosts Zimbabwe were leading Bangladesh by 175 runs with 6 wicket left in their second innings at stumps on Day 3. While the visitors allowed ...